Feeder And screen vibrating - Tanzania Crusher
Tanzania Crusher>>Feeder And screen vibrating
article from: Feeder And screen vibrating | | fotoana: Aprily, 2013 | tag: Feeder And screen vibrating
Ny efijery mivezivezy dia endrika vaovao hijerena fitaovana vato. Ny orinasan-tseratsera Baosteel any andrefana sy avy any amin'ny teknolojia avo lenta hafa, avy amin'ny orinasa Xuanshi dia mamokatra ny filaminana eo amin'ny sehatry ny asany, ny fahombiazan'ny faharetana, ny fikolokoloana mora, ny fiainana lava sy ny toetra hafa, satria ireo toetra ireo dia mety hampiasaina amin'ny fitrandrahana, ony, simen, ary saha hafa. Ny fahombiazan'ny fahombiazana sy ny endriny: 1. Ny efijery vibrating dia mampiasa vibrations isolatio. hamaky bebe kokoa...
Xunashi vibrating feeder dia karazana fitaovam-pitaterana milina fitarihana. Natao sy novolavolaina mba hamokarana fitaovam-pandrefesana sy granules ary vovobony avy ao amin'ny trano fanobiana na hopitaly amin'ny fitaovana fandraisana. Mandritra izany fotoana izany dia afaka mamita ny fandaharam-potoana ireo fitaovana. Vita amin'ny vy be tsara avy ao Baosteel, ny mpaninjara vibrant dia mitafy, manana fahatanterahana azo antoka sy fiainana lava. Fanamafisana ny fitaovana sy ny endri-javatra: 1. Toeram-pandrosoana mahaleotena ... hamaky bebe kokoa...
Ny fitaovam-pandevonan-tseranana sy vatosoa izay ampiasaina amin'ny fitaovam-pamokarana sy famokarana herinaratra no tena ampiasaina. Ny fandefodin'ny fehikibo dia manana anjara toerana manan-danja amin'ny fampifandraisana ny toeram-pamokarana tsirairay, izay manampy amin'ny fanatanterahana ny fitohizan'ny fanatontosana sy ny fametrahana ny famokarana vokatra, ny fampivoarana ny vokatra ary ny fampihenana ny haavon'ny asa. Izany dia fitaovana mpanampy novolavola miorina amin'ny fitsipi-pifehezana fiara. Ampiasain'ny mpandrindra fehiloha Xuanshi amin'izao fotoana izao amin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, metallurgy, chimique, vatosoa, fitaovana fananganana ... hamaky bebe kokoa...
Ny fitaovam-pamokarana elektrika Xuanshi Elektronika dia karazana fitaovana fanondrahana vaovao izay mety miasa tsy tapaka. Noho izany, dia nampiasaina tamin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, ny fitrandrahana, ny arina, ny fanorenana, ny indostrian'ny hazavana, ny indostria simika, ny herinaratra, ny fitaovana, ny sakafo, ny fanafody ary ny famokarana ny indostrian'ny harena ankibon'ny tany. Izy io dia ampiasaina amin'ny fitaovana ampiasaina amin'ny fitaovana fitaterana fandefasana entana, siramamy vita amin'ny biriky, fitaovana fisitahana, fitrandrahana simenitra, crèmeurs, crasher, ary ny voamaso na ny herin'ny orinasa indostrialy hafa. hamaky bebe kokoa...
Ny fitaovana fitaterana fehikibo dia ahitana ny fehikibo fitaterana izay tohanan'ny milina. Ny halavan'ny dia afaka miovaova amin'ny 1.5 mankany 3 m ary haingana amin'ny 0.005 ka 0.5 m / s. Ny fepetra amam-pahefana dia tsy mitovy amin'ny 3 na 30 hp. Ity karazana mpanenona ity dia tsara indrindra ho an'ny fanaraha-maso akaiky ny fasika sy ny fasika, indrindra ho an'ny fitaovana maina sy tsara. Manana rafitra tsotra sy mora izy io, mora alaina. Ny fepetra herinaratra dia ambany ambany ary ny volavola dia azo fehezina ao anatin'ny 1% avy any amin'ny seranana lavitra ary miaraka amin'ny rindrina mitaingina mankany amin'ny entana rehetra. hamaky bebe kokoa...